Vista's Colorful Planet: မြန်မာပြည်ခရီး ( အစားအသောက် )
မြန်မာပြည်ခရီး ( အစားအသောက် )
ကျနော်က ငါးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ရောက်လေရာအိမ်တွေက ငါးချက်ကျွေးပါတယ် .ဒါကတော့ ငါးကြင်းရေချိုနဲ့ငါးပိအတို့ အစုံပါ ( ကန်စွန်းရိုးနီ၊ နံနံပင်၊ ကနဖေါ့ ၊ မုန်ညင်းဖူးပြုတ်၊သရက်ကင်း )
ငါးမြွေထိုး နဲ့ ဘဲဥရောချက်တဲ့ဟင်းပေါ့ (ထိကရုန်း ၊ပေါက်ပန်းဖြူ ၊ဘော့စကိုင်း၊ခွေးတောက်ရွက်..အတို့ တွေ )
ငါးကြင်းရေချို ကျနော့်အန်တီကြီးလက်ရာ ကျနော်အကြိုက်ဆုံးပါ
ဒါကမန္တလေးကဆိုင်မှာစားတာ (ဆိတ်သားနှပ်၊ဆိတ်ဦးနှောဏ်၊မှိုကြော်၊နို့ ခဲကြော် ..)
စစ်ကိုင်းကဆိုင်မှာစားကြတာ ဆတ်သားလည်းပါတယ် တို့ စရာက အရမ်းစုံတယ် ခရမ်းချဉ်သီးချက် ကလည်းအရမ်းကောင်းတယ် side dishes တွေလည်းအများကြီးပေးတယ် :P
ခုတင်ထမင်းစားပြီးလဲ ရှလွတ် ငပိတော့မရှလွတ်ဘူး မကြိုက်စ်
စစ်ကိုင်းဆိုင်က ဘာနာမည်လဲ ဂလောက် ဟင်းရံတွေစုံတာ ပဲနှပ်ကလေး စားချင်လိုက်တာ တို့ စရာပါရင် ရပြီ ခရမ်းချဉ်သီးချက်လေးနဲ့ကျန်တဲ့ဟင်းသိပ်မလို
ပန်းဝါဆိုလား ဆိုင်နာမည်က ကိုယ်လည်း
အတို့ ရယ်ခရမ်းချဉ်သီးချက်ရယ်ပဲစားတာများတယ် ..
အစားအသောက်တွေက တော်တော် မြိုင်တာပဲနော်။ ကောင်းလိုက်တာ အရသာလဲ ရှိမဲ့ပုံဘဲ
"ကျနော်က ငါးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ရောက်လေရာအိမ်တွေက ငါးချက်ကျွေးပါတယ် ."
You got fantastic photos, love it.
မြန်မာပြည်က ဟင်းတွေမှန်း သိသာတယ်။ ဆီပေါလို့။
မမလည်း ငါးကြိုက်တယ်။ =) ... မြင်သာမြင် မကြင်ရတဲ့ ပုံတွေကို လာငေးသွားပါတယ် ညီမလေး။
ညီမလေးရေ...ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်ကစ မင်္ဂလာအပေါင်း ခညောင်းပါစေ။
[url=http://cialisonlinehere.com/#hlgsf]buy cialis[/url] - generic cialis , http://cialisonlinehere.com/#yevxx cialis online
မြန်မာပြည်ခရီး ( ဈေးမြင်ကွင်း )
မြန်မာပြည်ခရီး (မုန့် တွေ )
မြန်မာပြည်ခရီး (ပိုက်ပိုက် )
မြန်မာပြည်ခရီး (ကြေးအိုး )
Somehow Life Goes On - New Lomography project.